Akụkọ - Uru nke ngwa nke alumini foil gasket
Ngwa uru nke aluminom foil gasket
Ngwa Uru nke Aluminium Foil gasket
A na-eji aluminom rụọ alumini nke alumini mgbe ịpịchara ya wee mee ya dịka ebumnuche dị iche. Ọ na-ejikarị ya na ụfọdụ nkwakọ ụlọ ọrụ na-anọrọ ikuku na ịgbatị adị ndụ nke ngwaahịa. Ya mere, olee uru nke alumini foil gaskets? ?
Nke mbu, ihe mkpuchi aluminom bu nke na-egbu egbu na adighi uto na mpaghara a. Na mgbakwunye, ọ nwere ezigbo ikike antibacterial. N'ikwu ya n'ozuzu, microorganisms enweghị ike itolite na ya, yabụ elu ya dị ọcha yana uru ndị ọzọ, yabụ a na-ejikarị ya eme nri. Na nkwakọ ngwaahịa; n'aka nke ọzọ, aluminom foil gasket bụkwa opaque, n'ihi ya, ọ nwere ezigbo ihe nchebe na ngwaahịa ndị na-eche maka ìhè anyanwụ; ọ bụghị naanị nke ahụ, ọ dịkwa oke mkpa maka mmeghe ya dị mfe mgbe ejiri ya na nkwakọ ngwaahịa. Ma obere ike ya nwekwara ike ịdị mfe maka ndị na-azụ ahịa imeghe; yabụ na ọ bụ ngwugwu nkwakọ ngwaahịa dị elu nke jikọtara ịma mma, ịdị irè, na ịdị mfe nke iji ya.
Aluminom foil gasket adịghị egbu egbu mgbe ewe iwe ya, n'ihi na gasị aluminium bụ ihe na-eme ka ọ dị ọkụ nke a na-agbanye n'ime mpempe akwụkwọ na aluminom. Mmetụta ya na-ekpo ọkụ dị ka nke ọlaọcha ọlaọcha dị ọcha, ya mere a na-akpọkwa ya akwụkwọ mpịakọta ọlaọcha adịgboroja. Ebe ọ bụ na aluminom nwere ọdịdị dị nro, ezigbo ductility, na ọla ọcha na-acha ọcha, ọ bụrụ na a na-agbanye mpempe akwụkwọ a na-edozi akwụkwọ na sodium silicate na ihe ndị ọzọ iji mee aluminium, enwere ike bipụta ya. Agbanyeghị, mpempe akwụkwọ aluminom n'onwe ya dị mfe ịgbanye na agba na-agba ọchịchịrị, na agba ga-adalata mgbe a na-ete ya ma ọ bụ metụ ya aka, ya mere, ọ gaghị adabara stampụ ọkụ nke mkpuchi akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ nke echekwara ogologo oge.
N'ezie, ọ bụghị naanị na ọ nwere nnukwu uru na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, kamakwa ọ bara uru dị ukwuu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Post oge: Ọkt-31-2020